Ukusebenza Ububanzi: 3000mm
Ubude bokusebenza: 1350mm
Ukusebenza komthamo: 950m³ / h
Ubushushu obuphezulu begqubayindlela esebenzayo yokujongana nemfuyo kunye nomgquba weenkukhu. Ingathobisa umbandela wezinto eziphilayo kwimfuyo nakwimfuyo yenkukhu ngamagciwane, ngaloo ndlela ivelise ubushushu obuphezulu, ukubulala iintsholongwane ze-pathogenic, ukuphucula i-humus yezinto eziphilayo kunye nokuphucula ukusebenza kwesichumisi. Izixhobo zokuchola (ezinje ngeCompost Turner) yeNanning Tagrm Co., Ltd ayinabungozi kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona njengemfuyo kunye nomgquba weenkukhu. Ixesha lokwakha izixhobo lifutshane, kwaye inqanaba lobukrelekrele bakwisikhundla esiphambili kwihlabathi.
Namhlanje, I-TAGRM 'Umatshini Wokujika Umgquba usetyenziswe ngempumelelo kumazwe angaphezu kwe-100 anje ngeVietnam, iJordani, iArgentina, iRashiya, iBrazil, iEcuador, iMalaysia, iKuwait, iIndonesia, njl.
Umzekelo M3000 Ukucoca komhlaba 100mm H2
Rate Amandla 80KW （108PS） WEITOU Uxinzelelo lomhlaba 0.43Kg / cm²
Ukukala isantya 2200r / min Ububanzi bokusebenza 3000mm Ubukhulu.
Ukusetyenziswa kwepetroli ≤235g / KW · h Ukuphakama kokusebenza 1300mm Ubukhulu.
Ukunyathela okurhubuluzayo 3140mm W2 Isantya esingasemva L: 0-8m / min H: 0-24m / min
Ububanzi berawler 300mm Intsimbi Yondla ububanzi bezibuko 3000mm
Ngaphezulu 3635 × 2670 × 3000mm W3 × L2 × H1 Ukuguqula irediyasi 2100mm imiz
Ubunzima 4000kg Ngaphandle kwepetroli Imo yokuqhuba Ngesanti kubunzulu baphantsi
Ububanzi roller Ubungakanani: Ngemela Amandla okusebenza 950m³ / h Ubukhulu.
Egqithileyo Umatshini wokwenza umatshini wokuthengisa oshushu wemfuyo yenkunkuma
Okulandelayo: Umatshini we-CE womgquba owenzela imfuyo yehagu umgquba wejikajika